दुष्ट आधारहरू नष्ट गर्न खतरनाक प्रार्थना पोइन्टहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स दुष्ट आधारहरू नष्ट गर्न खतरनाक प्रार्थना पोइन्टहरू
इजकिएल १:18:२० जो पाप गर्दछ, त्यो मर्नेछ। छोराले बुबाको पापको निम्ति बोक्दैन, न त बुबाले आफ्नो छोराको पापको निम्ति दण्ड पाउँदछ।
आज हामी दुष्ट जगहरू नष्ट गर्न खतरनाक प्रार्थना बिन्दुहरू हेर्नेछौं। जब जग सही छैन, सबै ठीक छैन। जब तपाईं रूख ओइलाइरहेको देख्नुहुन्छ, जग पहिल्यै मरिसकेको छ। जीवनमा पनि, हाम्रो जगले हाम्रो जीवनको गुणस्तर पनि निर्धारित गर्दछ। जीवनमा मानिसहरूले सामना गर्ने धेरै समस्याहरू एक गल्तीको जगमा अवलम्बन योग्य छ। यो एक दोषपूर्ण शारीरिक जग, एक दोषपूर्ण आध्यात्मिक आधार वा दुबै हुन सक्छ। एक दोषपूर्ण शारीरिक आधार गरीब शिक्षा, गरीबी र अन्य भौतिक कारक हुन सक्छ जसले फाउन्डेशनलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। आजको यस लेखमा, हामी दुष्ट जगहरू हेर्नेछौं र हिंसात्मक प्रार्थनाहरू मार्फत कसरी त्यसबाट फुट्ने। यो दुष्ट जग आध्यात्मिक आधारहरू हुन् र केवल आध्यात्मिक रूपमा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। आज तपाईंले यस प्रार्थनालाई औंल्याउनुहुँदा स्वर्गका परमेश्वरले तपाईंको नाम येशूको नाममा मर्मत गर्नुहुनेछ।
के एक आधार हो
एक फाउंडेशन केवल तपाईंको जरा, वंश र / वा पैतृक पृष्ठभूमि हो। आध्यात्मिक आधारले तपाईंको जराको आध्यात्मिक अवस्था वा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्छ। यदि तिम्रा पुर्खाहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सेवा गरे भने, तब तपाईंको आध्यात्मिक आधार धन्य हो र पवित्र छ। तर यदि तपाईका पुर्खाहरु भूतपूजक छन् भने तपाईको जग अन्धकार र दुष्ट छ, तपाईले आफूलाई सबै त्यस्ता शैतानहरुबाट अलग गर्नु पर्छ वाचा। धेरै इसाईहरूले गरेका गल्तीहरू यी हुन्, तिनीहरू सोच्दछन् कि अब तिनीहरू मुक्ति पाएकाले नै तिनीहरू अन्धकारको शक्ति र दुष्ट जगदेखि मुक्त छन्। हो, तपाईं तिनीहरूबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर तिनीहरू तपाईंबाट स्वतन्त्र छैनन्, तपाईंले तिनीहरूलाई छोड्नुभयो तर तिनीहरूले तपाईंलाई छोडेनन्। शैतान अझै पनी तपाईं पछाडि आउनेछ कि तपाईं नयाँ सृष्टि हो वा होइन। शैतान अट्टेरी छ र लगातार छ, त्यसैले उसलाई मात गर्न, तपाईं दृढतापूर्वक उहाँलाई प्रार्थनामा प्रतिरोध गर्नै पर्छ। तपाईंले निरन्तर खतरनाक प्रार्थना बिन्दुहरूमा संलग्न रहनुपर्दछ तपाईंको जीवनको बिरूद्ध काम गर्ने हरेक दुष्ट संस्थात्मक करारहरूबाट आफूलाई अलग राख्न। यस खतरनाक प्रार्थनाले दुष्ट जगहरू नष्ट पार्छ भने तपाईंलाई येशूको नाममा शैतान र त्यसका सबै दुष्ट करारहरूबाट स्वतन्त्र हुन शक्ति दिनेछ। आज विश्वासको साथ यो प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाईंको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुहोस्।
हे प्रभु, मलाई येशूको नाममा हरेक असल काममा स्थापित गर्नुहोस्
२. म येशूको नाममा लामो जीवन र समृद्धि दावी गर्छु
Peace. शान्तिका ईश्वर, येशूको नाममा मलाई पूर्ण रूपमा पवित्र गर्नुहोस्
Christ. येशूको नाममा विश्वास गरेर ख्रीष्ट मेरो हृदयमा राम्ररी बस्न सक्नुहुन्छ
Death. म येशूको नाममा मेरो विरुद्धमा मृत्यु र नरकको हरेक शक्ति पक्षाघात
I. म येशूको नाममा मृत्युको कुनै पनि शैतानी तरवारले हमलाबाट छुटकारा पाएको दाबी गर्दछु
I. म मर्नेछैन तर येशूको नाममा प्रभुका कामहरू घोषणा गर्न बाँचिरहनेछु
My. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा येशू नआउन्जेल मेरो शरीर र आत्मालाई दोषरहित रहन दिनुहोस्
I। म येशूको नाममा स्वर्गदूतहरू सहायता र सुरक्षा दावी गर्छु
१० हे प्रभु, मलाई येशूको नाममा हुने हरेक असल काममा फल फलाउन दिनुहोस्
११. म मेरो शरीरमा भएका सबै अपरिचितहरूलाई आदेश दिन्छु कि अब येशूको नाममा जान दिनुहोस्
१२. प्रभुको वचन सित्तैंमा पाउनुहोस् र येशूको नाममा मेरो जीवनमा महिमा होस्
१ my. म मेरा सबै पछि लाग्ने शत्रुहरूलाई मेरो खातिर अब येशूको नाममा फर्कने आज्ञा गर्दछु
१ against. म मेरो विरुद्धमा काम गर्ने हरेक पुर्खालाई येशूको नाममा खसे र नष्ट हुन आज्ञा गर्दछु
१ declare. म घोषणा गर्छु कि म येशू ख्रीष्टको नाम भन्दा माथि मात्र होइन
मलाई येशूको नाममा ईश्वरको ज्ञानले भरिदिनुहोस्
१ me. म हरेकलाई घोषणा गर्दछु जसले मलाई आशिष् दिन्छ धन्यका हुन् र सबैले मलाई सराप्छन् येशूको नाममा श्रापित छन्
१ the. अभिषेक एक विजेता भन्दा बढी ममाथि पर्नुहोस्, येशूको नाममा
येशूको नाममा मलाई सबै कुरा खुशी पार्न प्रभुको योग्यको रूपमा हिंड्न दिनुहोस्
२०. म येशूको नाममा हरेक समस्या सर्प र बिच्छुलाई कुल्चीमिल्छु।
Glory०. मेरो बुबा, मेरो बुबाको घरको दुष्ट शक्तिले गाडिएको मेरो महिमा, येशूको नाममा आगोले बाँच्यो
अघिल्लो लेखमाअप्रत्याशित घरेलु शत्रुहरूका विरुद्ध प्रार्थना
अर्को लेखमाकेज वा सपनामा जेलमा हुनुको विरुद्ध प्रार्थनाहरू
जीन फिलिप अप्रिल १,, २०२० बिहान :21:१
धेरै धेरै धन्यवाद म मलाई मद्दत चाहान्छु, म दुई जादू-टोनासँग संघर्ष गरिरहेको छु एउटा जादूगर कृपया मलाई प्रार्थना गर्नमा मद्दत गर्नुहोस्
२० गडबडमा आन्तरिक शान्तिको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू